Hiiriir Oromoon Gegessa jiruu hanga Bilisummaati akka iti fufu waamichaa qabsoo dhiyeesinaf !!!!
Fiqaadu Shumata dec.18/2015 Uukafame.
Wayyanen wagga 25 guyya tokko dhuga dubatee hin beektuu, wayyanen uumataa Ethiopia waan lama barsiftee baduuf deemtii soba fi malamaltuuma.
Ummani Ethiopia wagga 25 keessati TPLF/Wyyanen/OPDO waan baratate yoo jirate soba fi malamaltumadha. Mootumman Ethiopia fi Oromiyya torbee kana gutuu wajjirii Maaster Pilani cufameera jeedhan soba turan. Garuu Bajeeta wajjirecha raggasisa, hojeeta wajjiracha qacara jiru. Waan birra dhisaati Wayeen Maaster Pilani hafeera jeedhan wara dubatan mee ija isaani irra dubsa, soba ta’uu isaa argituu. Dubata Ethiopia/TPLF obbo Getachew Rada waan ini duubatee Seena Ethiopia keessati bara Minilik, Haile Silasse fi Dargii jeechii akkasi bakka bu’aa mootumman dubatamee hin beeku. Geetachew Rada uumata Oromoon Xanqoyii, Aganiniti, Seexana kkf jeechuun Abarun yakka. Mootumman kun akkuma Gaafa Gaadaafin kufu jala ga’ee dhadatuu fakatuu. . Mጋዳፊ ያኔ በስልጣናቸው ላይ ሆነው ተቃውሞ የወጣባቸውን የቤንጋዚ ህዝብ ከማዳመጥ ይልቅ፣ "አይጦች"፣ "አሸባሪዎች"፣ "ሴሰኛ ቦዘኔዎች".... ወዘተ ብለው ሰደቡ። ከዛ በኋላ የሆነው የቅርቡ ጊዜ የታሪክ ትውስታችን ነው። የወያኔ መንግስት ባለስልጣናት እነሱው በጻፉት ህገ-መንግስት መሰረት የኦሮሞ ህዝብ በሰላማዊ መንገድ ወጥቶ መብቱን ሲጠይቅ፣ "አሸባሪ"፣ "ጋኔል"፣ "ጋንግስተር"፣ "ጠንቋይ"፣ "ልክ እናስገባቸዋለን" ....ወዘተ እያሉ ነው። ከዚህኛው በኋላስ የሚሆነው የታሪክ ትውስታችን ምን ይሆን?.
Jeechoon kun qoofan isaa qoofa utuu hin tane mootummaa fi kabine biyyati hunda hoji irra arisisuu qaba ture akka seerati, amaaf biyya seerii hin jiree waan ta’ee gaafa abban seera fi abba biyya isaan gaafachisa, uumani Milliona 50 ol ta’uu Oromoo akkasi abaramuu hin qabuu.
Mootummaan biyyati kan ogganan namoota samuu siiyassan yaadan utu hin tanee wara samuu caaqan akka rephee lolati yaadan qoofadha. Kana kan jeenef Maaster Pilani Oromoon hundi diidee kana dafan hunbatani gaafii qabsaa keedhuu dhabuu isaanti. 2faa uumani biyyati miseensaa isaan dabalatee utuu kaba kibati, ba’ahh adhiyyati falmatuu namoota murasatuu jeequmsaa ofa jira jeechun isaan uumataa birrati isaan saxilee jira, 3faa. Mormiin kun OPDO keessati kan egalamee ta’uu utuu beekan Oromoo hundaan gegefama jirachuu utuu beekan humana laltuu duba jira, Olola ABOti jeechuun isaa hanqina dandeeti qabachuu isaan mulisa. 4. ABO hin jiruu jeechaa tura hara amoo Qeerron Bilisumaa hundi ABO dha, OFC hundi ABO dha jeedhan hidha jiru.
Hiriri biyya keessa Jabatee itti fufu qaba. Oromoo hundi Ansi hiirira bayeera jeechuu qaba, Oromoo hundi hiirira ba'ee utuu hidha jiruu Hiriri tasumaa hin dhabatuu. Hanga Oromoo maqa siyyassan hidhamee hundi ba'uuti Hiriirii keenya itti fufa jeechuu qaba oromoon. Lamii Oromoo Zoni 18, Magaloota Gurguda 309 fi Bulchisa Magaloota 564 fi Ganda 6712 keessa jirtu bakka hundati kara cuufee hirira ba'uu qaba. Fiqaaduu Shumata fi Oromoo hirira ba'ee hundi yakka tokkolee hin qabani, Mootummi adunya hundati beesifamuu.
Oromoo kan beekuu qabu jarri kunoo gochaa akkasii nurratti raawwataa jirti. Sochiin kun yoo qabbanaawe waan kana caalutu dhufa.
Baratoon Oromoo University Ethiopia keessa jira warii Hiiriira Naga ba’aan fi warii hin ba’iin ilee Oromumma isaa qoofan University keessa ari’amun yakka duguguga sanyii, University Aduwa keessati ijoolee Oromoo 13 badii tokko malee miseensa OPDO tokkon yaakaman hidhaman jiru, Maatuu University keessa baratoon Oromoo qaroon 18 badii tokko malee ar’aman jiru, Goocha sukanessan University Haromaya, Jimmaa fi Wallaga keessati raawwatamee hanga amati balan isaa adda bafatamee hin beekamnee, baratoon University adda keessa uukafaman bakka buteen isaan dhabamee hanga amatii hin beekamuu. Lubuun Oromoo 100 badee reefi isaa ilee awwalchaa dhabee Agaziin fi Polisin feederala Konkolatati reefa fee’atee itti xabata jira. Bakka heedutii uumani ijoolee isaa irrati lolun wareegama gudaa kafala jiruu Zoni Daùmbidoloti haati ilimoo ishee irrati falamtee wareegama kafalte jirti. Mana barumsa Nekemteti maatiin ijoole isaa irrati waregama kafalan jiru.
Bakka tokko tokkoti garuu hirmana uumata mursa fakeenyaf akka Baratoon University Jimmaa nu dhamanti “Gootichii University Jimmaa Mirga Oromoof falmachuu irrati yeeroo hunda hangafa ta'uun isaa kan enyuun ilee mamsisuu miti, bara darban Universityn Jimmaa Gaafi Oromoo haqa irrati hunda'uun gaafacha turan gaafacha jira. Uumani Jimma garuu ijoolee kooti jeedhe nu irrati diirman ini goodhu heeduu murasa. Yeeroo bayee ijoolee Baratoota Oromoo Waraana Tigire baqate isaanti dheesutuu qaban dabarsun hamilee baratoota xuqamee jira. Fkn barsiisaan civil engineering Magaalaa keessa bakka markaatoo jedhamutti qofaa isaa dhaadanno master plan, akkasumas mormii mootummaa irratti qabu dhageesisuun ummata birmatu dhabuu isaa irraan kan ka'e mana hidhaa galfamee jira. Mee ummata isa kamtu hanga kana callisa. Kun rakkooma ummata jimmaati. .Guyya Bilisimuman dhufee wal komachuu irra amuma wal gorfanee waliin deemuu qabna, Ambo, Hararge keesumati Awaday, Walaga Ijoolee isaa irrati yooamuu lolu jimmaa dabarsee nu latuu hin qabu, Oromoon hundi Mootummaa Tigire Balaleefatee fincila jira jimmaa ciisuu hun qabuu jeena jeedhaniruu.” Foon Abba Jifari isiin haa ta'uu ciisicha ka'aa iyya Oromoo irrati dirmadha. Walagi egalee, ambo lola jira jimmaa maaf caalisa? Agaroo, Yeebuu, Sarboo, Sokoruu, Danaba, Saqaa, Deedoo, Xiiroo Afatan, Omoo Nadda ,Limuu Saqaa, Limuu Genetii essa jirtuu??Ka'aa??? jeechaa jira.
Wayyanen nama Oromoo ta'ee morimiif qoopha'a jirta, ABO degerta, qeerroo waliin qunamtii qabda jeechuun Oromoo Jumulan hidha jirti. Kun amoo kan itti hamacha jiru bakka hiiriri itti qabna'ee fi bakka hiirir hin jireeti fakeenyaf bakka hiiriri hin jiree Finfinnne Minilik Hospitala Oromoo hojeetan hundi hidhamuu, Gimbii Hospital nami heedu hidhamuu, Manasibuu fi Qilxuu kara erga hiirirri dhabatee booda namoota mana isaanti qaban darara gudaa irran ga'aa jirachuu isaa beekamee jira. Kana irrati hunda'uun Namoon mana hidha jiran fi maatiin isaan jala dhuman dhamasa gababduu fi waamichaa qabsoo dhiyeessa jiru. Inisi: Oromoo hundafi, Mormii kan egalee wayyane buqifnee mirga Oromoo kabachiisuuf malee lammiin keenya dhibataman erga du'ee fi kumataman erga hidhamee booda, baratoon Oromoo harki caalan erga barumsa irra dhabatan booda, akkasumati akka waan tokko hin goodhamtin caalisuuf miti, erga Oromoo hangasii du'ee dhiiga wal laqanee booda TPLF waliin jirachuuf araramii akka hin jiire beekuu qabna, Baratan Oromoo harkii caaluu erga barumsa irra ari'ataman booda Oromoon mana barumsa seene baratuu jirachuu hin qabuu, lubu badeef yakkamtoon utuu itti gaafatauu qaban baratoota du'aan awwalchuuf reefa isaanti Birii 5,000 gaaftamuu caalaa yakki Oromoo irrati goodhamuu hin jiru.
Kanaafu Qabsoof waliin mana banee utuu dhiigi keenya diiree cisuu reefi keenya hin awalamin hiirira fi mormii dhisaan ol galuun, utuu baratooni fi qootee bulan mana hidhaa keessati dararma jiruu hiiriira fi mormii dhisan mana oluun cubuu fi seena birrati nama gaafachisa jeena. Ittigafatama seena kana jala ba'uuf Oromoon hundi Ganda hunda keessati karaa cuufee wayyane lagachuun mormii wal irra hin ciinee hanga bilisumati qabsoo goochuu qaba. Ummani India UK jala kan bilisooman lola meeshan utuu hin taneen fincila walii irra hin ciinee goochun biyya Englsh wagga 500 booda biyya isaanti ari'achuu danda'an jiruu" kanaafuu qabsoo guyya dha gara guyyati cimmisen itti fufsisuu qaba jeechun dhamsa fi waamicha dabarfatani jiru.
Tokko tokkon mana keessa qaban hidhamuu irra Hiiriira irrati bayyatan wal duuka hidhamuu wayya kanaafu bakka hundati hundi hiirrirati habanuu
Manasibu fi Qilxuu karaa Keessati Miseensoota OFC FDG qindeesite ilaachaa ABO qabduu jeedhama namoota Mana isaati qabaman dararama jira Jarsooli hidhamuuf hin malee
1. Obbo Miizanaa Gammada Jaarsa umuri wagga 80 ol
2. Obbo Oljirraa Dibaar Jarsa wagga 75 ol
3. Obbo Hirpha Disasa jarsa 65 ol mana hidhaa waraana fi . Poolisi keessati dararama jiru, Namoon kun erga TPLF angoo qabatee bara baran hidhama jiru.
4.Barata Fiqaaduu Shumata hiirira naga batee suuran kee media hundairrati ba'ee jeedhamee dorsisa sodatee gara fifinne erga deeme booda bakka buten isaa dhabamee jira. Dhaabileen mirga dhala nama dhaabileen famatan fi Fannoo diman adunya kaa barbadanfi iyyachuuf qabdu jeedhan jiru;
Ana Qiltuu kara irra amo
1. Bultii Jaallattaa Miseensa OFC garuu Miseensaa ABOti jeeedha Kana dura yeeroo heedu hidhmaun torchi cimman qamii isaa kan hiratee,
2. Raga'a Mulatuu Miseensa OFC yeeroo adda yaaka tokko malee maqa ABOn kan dararama ture.
Kana malee namoon bakka buteen isaa hin beekamne bayee ta'uu isaan dhammisi Mandi irra nu ga'ee ni mulisa Aannalee irra dhamsii nu qaqabe akka ibsuuti.
Uummata ganda baadiyyaa irra deemtee OPDOn gaaffii keenya miti jedhaa mallatteessaa jettee mallatteessisaa waan jirtuuf, Oromoo dhiimma kana dogogoran fi gorsa jarsolin goocha yakka kana akka hin malateesineef kara media Oromoo hunda akka gura uumataa bu'uuf O. M. N tiif nu dabarsa ! jeedhani dhamacha jiru. Gaafii kun gaafi keenya miti jeedhan malateesun of ofi ganuu dha. Ummani Oromoo hundi gaafiin kun gaafi Oromoo hundati jeedhe yeerroo du'aa jiru kana Ummani Manasibu fi Qilxuu karaa gaafii keenya miti jeedhe malateesun yakka gudadha.
Qabsoo keessati jarsuman tasuma hin jiru, TPLF marii fi jarsuman bara 2014 goodhamee bu'aa tokko ilee hin fidee, kana booda TPLF/OPDO waliin marii fi jarsuman goodhamuu tokko ilee akka hin jiree Qeerron Oromoo fi uumanii Oromoo jala murani beekuu qabu. Jaarsumman fi Ararii goota keenya J/Taddassa Biruu fi K/Hailu Ragassa iyuu lubu galafatee. Qabsoo keessati erga dhiigi dhagla'ee fi dhiigi uumata ho'ee booda arara fi marii goochun harka lachuu waliin tokko. Bara darbee waan Abban Dula Ambo irrati dubatee uumata sobee dhiigi Oromoo 100 lakawamuu dhagalayee hanga bishani ilee gatii dhabee, Oromoo waan darbee yaadadhu hin gowomin lamafa.
Kara itti soochii diina lamshesanu baruuf gurma’uun dirqama;
Oromoo diina Oromiyya keessa jiruu irratti ugura ka’uun lola tokko malee Oromiyya keesa ari’achuu ni danda’aama. Yoo wal gurmeese, wali galee ugura akkasi ka’uu qaba:-
Diina waliin daldaluu dhisuu Bank Habasha fi Bank Daldala Ethiopia keessa Malaqa basuu,
Tigire Amanuu fi waliin hojjechuu dhisuu,
Diina irra bituu fi itti gurguruu dhisuu,
Hotela diina lixee nyachuu fi dhuguu dhisuu,
Diina Oromooti firomuu dhisuu,
Diinatti heerumuu fi diina fuudhuu dhisuu,
Diinatti kara argisisu dhisuu,
Mana barumsa diina barachuu dhisuu,
Diinatti lammi kee saxiluu dhisuu,
Afaan diinan dubachuu dhisuu,
Diina waliin ijaramuu dhisuu,
Diina waliin sagaduu yookiin waqeefachuu dhisuu,
Konkolata diina yaabachuu dhisuu,
Diina Akkasi Oromoo Abidan Gubuu, Lafa irra buqisuu, biyya nu ari’atuu,
Shamaran keenya Arabati gurguratu, Qabeenya keenya samee samisuu waliin
harirroo hin qabnuu.
Qabeenya TPLF fi degertoota isaa (Qabeenya diina hunda) Oromiyya keessa barbadeesuu,
Dhiigi Amasii dhagla'ee diina buqisuu malee ararati deebiyuun murtee du'aa ofti murtesuu dha,
Qabeenya wayyaanee kan ta'e martinuu Oromiyaa keessa kan socho'u yoo ta'e qeerroon Oromiyaa tarkaanfii cimaa irratti fudhachuu qaba.
Ilmaan Oromoo leenjii waraanummaa yeroo adda addaa fudhattanii ummata keessa jirtan,
Lola sanyii duguuggii ummata kee irratti labsame kana dhaamsuun ummata Oromoo dhumiinsa irraa baraaruu keessatti ummata kee ittisuuf ganda gandaan akka of ijaartu,
Lammiilee Oromoo hidhannoo qabdanf Duulli ummata Oromoo irratti baname, isiniinis dabalata. Waan taheef, meeshaa akka dhuunfaatti qabdaniin ummata keessan dhumaatii irraa ittisaa;
Motummaan wayyaanee humna waraanaa waan nurratti labseef,qabsoon keenya bifa ripheloltummaatiin tarkaanfii irratti fudhachuu
Lammiilee Oromoo biyyoota alaa keessatti argamtaniif karaa isiniif danda’ame hundaan, akkasumas, kan dandeessan maraan cinaa dhaabbadhaa.
Lammiilee saboota cunqurfamoo Oromiyaa keessa jiraattaniif Olola kijibaa ololuun Oromoo irratti isin hiriirsee umrii isaa dheereffatuu kajeela. Mirgi ummata Oromoo kabajamuun mirga lammi hunda kabajamuu ta’uu akka hubatan.
Goocha Yakka TPLF/Wayyanen Oromiyya irrat raawachaa jirtu kana Mootummoota Gamtoman(Unaided nations ), USA Department European commission and European Parliament ,Unaided Nation Human right Organizations , Amnesty international , Human right watch , International criminal courts , Africa union Haawwasii Oromoo dhaabileen hundi fi Dhaabilee mirga dhala namaf falmatan akka iyyatanf gaafacha jruu.
Gabbasa wal fakata qindeesine dhiyeesuu itti fufna